Present Continuous and present simple ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိုင်ဦး Saturday, October 03, 2015 SayarMichaellinlin No comments
အခုရေးမည့် အကြောင်းအရာက Advanced Level ဖြစ်တာကြောင့် အင်္ဂလိပ်စာကို သင်ယူခါစသူများ မဖတ်စေလိုပါ။ ပိုပြီးခေါင်းခြောက်စရာဖြစ်သွားနိုင်ပြီ ၊ အမှားပြုလုပ်မိမည်ကို စိုးရိမ်သွားသောအခါ အင်္ဂလိပ်စာနှင့် ပိုဝေးသွားတတ်ပါသည်။ လူတိုင်းမှားတတ်ပါသည်။ သို့သော် အပြုသဘောမဆောင်ပဲ ဝေဖန်လိုက်သောအခါ လေ့လာခါစ လူငယ်များ ကြောက်သွားတတ်သည်။ အပြုသဘောဆောင် ဝေဖန်ခြင်းများဖြင့် လောကကြီးသာယာပါစေ။ကျွန်တော်လည်း လေ့လာမိသလောက် ပြန်လည် ဝေမျှပါသည်။
Continuous tenses (progressive tenses) များနှင့်ပတ်သက်ပြီ အင်္ဂလိပ်စာမှာ Verb ကို အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲထားပါတယ်။ ယင်းတို့မှာ..
၂။ stative. တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Dynamic Verb တွေဟာ လုပ်ဆောင်ချက်၊ အပြုအမှု ၊ ပြုလုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ စကားလုံးတွေပါ။ ဥပမာ- walk / read/ yell စသည်ဖြင့် ဖြစ်ပါတယ်။
Stative Verb တွေကတော့ ရှိရင်းစွဲ အခြေအနေတစ်ရပ် (astate of being ) ကိုဖော်ပြပြီး သာမန်အားဖြင့် ( progressive tenses) ပုံစံတွေ ပြောင်းလဲမသုံးပါ။
State Verb များကို အောက်ပါအတိုင်း အမျိုးအစား ၄ မျိုးခွဲပြီး လေ့လာလျှင် ပိုမိုနားလည်လွယ်ပါသည်။
1.Verbs that show thought or opinion
such as “know” and “recognize” (I know her motives.)
2.Verbs that show possession
such as “own” and “belong” (The dog belongs to me.)
3.Verbs that show emotion
such as “love” and “need” (I love Squiggly)
4.Verbs that show senses
such as “feel” and “see” (I see what you mean).
ထိုအထဲမှာ နံပါတ် (၄) မှာပို၍ ရှုပ်ထွေးပါသည်။အကြောင်းမှာ ထိုအထဲမှ ကြိယာအများစုမှာ stative verb လည်း ဖြစ်နိုင်သလို dynamic verb လည်းဖြစ်နိုင်ကြပါသည်။ အထက်ပါ အမျိုးအစား ၄ မျိုးထဲမှ ၂ မျိုးလုံး သုံးနိုင်ပြီး အကြောင်းအရာ ၊ အဓိပ္ပါယ်ကွဲပြားသွားပုံများကို အနည်းငယ် ရေးပါမည်။
- I absolutely love chocolate.
ငါ ချောကလက် အလွန်ကြိုက်တာ။
Love က .. emotion တွေကိုပြတဲ့ ကြိယာဆိုတော့ . ( Present Continuous) မှာ..
I am loving chocolate.
He is loving his job. တို့မသုံးပါဘူး။ သို့သော်...
But tonight I'm loving you.... ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်သီချင်းကိုကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။
သဒ္ဒါစည်းကမ်းအရတော့ မမှန်ပါဘူး။ ကြော်ငြာ ၊ သီချင်းစာသား ၊ ဖက်ရှင် ခေါင်းစဉ် စသည့်နေရာတွေမှာ စံသဒ္ဒါအရ မမှန်ပေမယ့်သုံးပါတယ်။
> Justin Timberlake ရဲ့သီချင်း I’m Loving It”
> Scorpions ရဲ့သီချင်း Still Loving You ထဲမှာလဲ “I’m loving you.” ဆိုတာ ပါပါတယ်။
>“I’m loving it” လို့ McDonald က သူ့( ကြော်ငြာ) ဆောင်ပုဒ် (slogan ) အနေဖြင့်သုံးပါတယ်။ သဒ္ဒါအရ မမှန်ပေမယ့် စားသုံးသူရဲ့ အာရုံစိုက်မှုရလိုသောကြာင့် သုံးထားပါတယ်။
> maternity dress ( ဗိုက်ဖုံးအင်္ကျီ ( ကြော်ငြာတစ်ခုမှာလည်း ဒီလိုဆိုထားတာ တွေ့ဖူးပါတယ်။ “I’m loving the hot hue, the sweet, off-the-shoulder neckline …”
အဘိဓာန်တွေမှာတော့ .. love ကို progressive tenses - loving လို့မပြထားသေးပေမယ့် ..ဘာသာစကားဟာ အမြဲပြောင်းလဲနေတယ်၊ ပုံမှန်သဒ္ဒါအရတော့ မမှန်ဘူး။ အများကသုံးစွဲလာတဲ့အခါ လက်ခံလာသော ခေတ်စားသော(Idiomatic Uses of Stative Verbs) စကားများဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လို လေ့လာသူများကတော့ အမြဲ မပြတ်လေ့လာနေရမှာပါပဲ။
ဒီနေရာမှာ..... I love it. ထက် .. ယခု အချိန်အမှာ စာအုပ်အပေါ် ကိုယ့်ခံစားချက်၊ယူဆချက်ကို ပြောချင်တဲ့အခါ ။ I'm loving it . က ပို Active ဖြစ်ပါတယ်။
- A: What do you think of the new I pad?
- I'm loving every minutes of my new job!
“Hey, Jean. I’m loving that new haircut!”
နင့်ဆံပင် ပုံစံအသစ်လေး ငါသဘောကျလိုက်တာ။
“I’m loving my mother.” လို့တော့ ပြောလို့မရပါဘူး။ ( အခြား အလေးအနက်ပြုချင်တာမပါရင် )
လို့သာ..Permanent situation မှာသုံးပါတယ်။
Martin Hewings ရေးတဲ့ Advanced Grammar in Use ထဲမှာ
အခြေအနေတစ်ရပ်ဟာ ယာယီ ၊ လောလောဆယ် အချိန်ကာလမှာ ဖြစ်တာကို အလေးနက်ပြုချင်ရင် သုံးပါတယ်။
( want to emphasise thatasituation is temporary or foraperiod of time around the present .)
I see you've had your hair cut.
အခု ပြောနေတဲ့ အချိန်မြင်ရ၊ နားလည်နေတာကို I see လို့ပဲ သုံးပါတယ်။
Can နဲ့လည်းတွဲ သုံးပါတယ်။
- I am seeing ...လို့သုံးတဲ့ နေရာမှာ သုံးတဲ့ see က...မြင်တာ မဟုတ်ပဲ.. meet ..ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ ဆိုတော့ တွေ့ဖို့ချိန်းထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ.. ( Future arrangement )
- I am seeing the doctor at ten o'clock .ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ဖို့ချိန်းထားတယ် ။ (arrange with sb to meet ) ( arrange to meet )
I'm seeing Peter tonight.
နောက်တစ်ခုက ......တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ တွဲနေတာ..၊
Are you seeing anyone ? မင်းဘယ်သူနဲ့ တွဲနေလဲ။ ( တွဲခုတ်နေလဲ)
သူ(မ) သူနဲ့ကြိုက်နေတာ (တွဲနေတာ ) ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ
- Present Continuous ရတော့ ကျန်တဲ့ Continuous တွေလည်း ရတာပေါ့။
- How long has she been seeing him?
- He's been seeingawoman that I work with.
- She told me her husband had been seeing someone.
- Jane is seeing Harry. ( spending time with ) တွဲတာ..
- They've been seeingalot of each other recently . ( ချိန်းတွေ့တာမျိုး..)
I didn't hear any noises.
native speakers တွေကတော့ “I’m hearin’ ya” ( I'm hearing ) ဆိုတဲ့အသုံးကို သုံးကြပါတယ်။ ..ဒီအသုံးက သူတို့အတွက် ရင်းနှီးတဲ့စကားလုံးပါ။
. ဆိုလိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ..
“I understand your point of view.” ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် I am hearing .ဟာ ကြားတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲသုံးရင်သဒ္ဒါမှန်တဲ့ စကားလို့တော့သူတို့ ပြောမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
I am hearing you . မင်းပြောတာ ငါ ကြားနေတယ်လို့တော့ မသုံးပါဘူး။
You're hearing things. ( imagining )
Hearing things/ seeing things က Idiom ပါ... တစ်ခုခုကို ကြားတာ.. မြင်တာ.. တကယ်တော့မဟုတ်ဘူး... ဥပမာ.....အရက်ကြောင် ပြီး.....အသံတွေကြားနေတယ်... ဘာတွေမြင်နေတယ်..၊ အထက်က အသံတော်တွေကြားတယ် စသည့်ပုံစံမျိုး...ဘာညာ တကယ်တော့မဟုတ်ဘူး။
Your visa appears to be out of date. (
It appears that he is wrong.
He appears to be wrong.
seem - ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဆိုရင် ( Continuous မသုံးပါဘူး )
Tom is appearing in Hamlet at the Grand Theater. ( Perform )
ဖျော်ဖြေတယ်၊ ပါဝင်အသုံးတော်ခံတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဆိုရင် .(active ) Present Continuous သုံးပါတယ်။
He is appearing on television today.
ဒီနေ့ ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်မှာ သူပါမယ်။
This bag weighs more than 25 kilos. ( အလေးချိန် ရှိတယ် ) state
I'm weighing the parcel before I post it. ( ချိန်တွယ်နေတယ်.. ) action
အချိန်မရတော့လို့ ကျန်တာ နောက်မှ ဆက်ရေးမယ်ဗျာ...
ဆရာ Michael Lin Lin Facebook မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။ ဆရာ Michael Lin Lin ကျန်းမာပါစေ။